VZ Navigator ... Waxaan hayaa GPS ... Hadda waa maxay ?! | Martech Zone
VZ Navigator… Waxaan hayaa GPS… Hada Waa maxay ?!
Talaado, Agoosto 28, 2007 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Sheeko dheer - gaaban - taleefankayga ayaa jabay. Lacagta laga jari karo, leh caymis, wuxuu ahaa $ 50 iyo taleefan cusub oo GPS-ku shaqeeya wuxuu ahaa $ 30. Casharka la bartay - Weligay dib u heli maayo caymiska taleefanka.
Sikastaba, waan ku faraxsanahay inaan helo taleefan GPS-karti leh. Ogeysiis waxaan idhi, 'karti'. Habka dhabta ah ee Verizon Wireless, taasi waxay ka dhigan tahay inaad bixiso wax walba iyo wax walba. Waxay kor u qaadeysaa xirmada GPS, oo loo yaqaan VZ Navigator waa $ 9.99 bishiiba rukunka. Waxaan ahay GIS lowska sidaa darteed waa inaan isku dayaa.
Waxay umuuqataa (oo xor baan u ahay inaad i saxdo haddii aan khaldanahay), tani waxay ii oggolaaneysaa inaan sameeyo dhowr waxyaalood:
Eeg meesha Aniga khariidada khadka tooska ah ee keli ah ee aan marin u heli karo illaa inta aan fasax siinayo naftayda. (huh?) Hoos ka daawo shaashadda… Waxaan is tusay inaan guriga joogo!
Eeg meesha Aniga at khariidad ku taal taleefankayga.
U soo dir taleefan kale goobtayda adoo adeegsanaya farriin qoraal ah (khidmadaha farriinta qoraalka ayaa khuseeya) laakiin kaliya haddii waxay la socdaan Verizon sidoo kale.
Tilmaamaha ka soo degso taleefankayga (ma laga bilaabo bogga VZ Navigator). Aad ayey uga fududdahay shaashaddaas dhallinta yar, weeny.
Ka raadi alaabada agteeda khariidada taleefanka (sidaa darteed Verizon waxay ku heli kartaa xoogaa dakhli xayeysiis ah adeeggan lacagta ah waxaan u maleynayaa).
Markaa… haddii aan ku dhinto shil baabuur oo ka dhacay meel hadhuudh ah oo keligay ah, 9-1-1 ayaa i heli kara. Ama waxaa laga yaabaa in haddii si uun dowladda ii bartilmaameedsato, ay i heli karaan. Laakiin caruurtayda? Nope. I ma heli karaan maxaa yeelay kumana daabici karo goobtayda meel kasta oo toos ah oo ka baxsan adeegga Verizon's VZ Navigator.
Verizon… qofkasta oo jooga Verizon… hadaad tan aqrinaysid… maxaad si fudud ugu furi weyday arintaan si ay dadweynuhu u cunaan ?! Haddii aan doonayo goobteyda inay dadweyne ahaato, waa inaan awood u yeeshaa inaan ku dhajiyo meel fagaare ah. Xitaa ka sii wanaagsan, waa inaan awood u yeesho inaan horumariyo codsi adeegsanaya. Koraan! Xiritaanka tiknoolajiyada, si qarsoodi ah iskuma dayi doono inaan la hadlo saaxiibadeey oo dhan si aan ula socdo Verizon si aan ugu dirno goobaha khariidada midba midka kale. C'mon!
Niyad jab kale oo badan oo iga haysata adeeg bixiyahayga. Goormaan wax baran doonaa?
Waad ku mahadsantahay wicitaanka dhawaaqa AC / DC, haddii kale gebi ahaanba waan niyad jabi lahaa.
La soco Share Browser Suuqa Share ka Colts.com
Agoosto 29, 2007 saacaddu markay ahayd 12:56 PM
GPS waa qashin, ilaa uu gaarigaaga ku jiro mooyee. Waxaan hayaa taleefankayga waligay xitaa iskuma dayin inaan isticmaalo. Laakiin waxaan ahay naag markastana ogaada halka aan joogo. LOL
Ilaa Verizon, waan kuu sheegi lahaa, dan kama lihi adiga ama qorshaha aad iibsato. Adeeggooda macaamiisha ayaa ka mid ah kuwa ugu argagaxa badan marka laga hadlayo adeegga mobilada.
Ma doonayo inaan ku riixo adeegayga gacanta ee shakhsi ahaaneed laakiin waxaan dhihi doonaa tan, dhagaxyada AC / DC!
Agoosto 29, 2007 saacaddu markay ahayd 3:39 PM
$ 30? Gabadha taleefankeedu wuxuu kujiraa fritz, waxaan haysanaa Verizon, iyo taleefanka ugu raqiisan ee aan heli karo kahor bisha Janaayo markay qandaraaskeedu cusbooneysiinayo waa $ 140 a ..foon ay ugu magac dartay “geetto”. Ma rumaysan karo sida ay taleefannada qaaliga u yihiin illaa ay tahay in la cusbooneysiiyo qandaraaskaaga mooyee. Taleefoonnadoodu xitaa ma sii socdaan 2 sano dambe, sidoo kale.
Marka, ii sheeg, sidee taleefanka ugu heli kartaa $ 30?
Agoosto 29, 2007 saacaddu markay ahayd 7:36 PM
'Cusboonaysiinta' bilaashka ah 'waxay noqon doontaa bisha Diseembar. Kaliya waxaan galay internetka, waxaan xushay nambarka taleefankayga, waxaanan xushay taleefoon casriyayn ah waxaana laysiiyay liis. Haa, waa inaan kordhiyaa qandaraaskeyga - addoonsiga naftayda raggan dhowr sano oo kale.
Horey ayaan uga tagay AT&T dhamaan asxaabteyda Sprint-na way necebyihiin… marka aniga ayaa la iiga fadhiyaa wax aan ku badalo